Somaliland: Dahabshiil Group Oo Jaamacada Bariga Afrika Ee Buuhoodle Gudoonsiisay Deeq Dhan $10,000 kun Oo Dollar - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Dahabshiil Group Oo Jaamacada Bariga Afrika Ee Buuhoodle Gudoonsiisay Deeq Dhan...
Shirkadda xawaaladda lacagaha ee DahabShiil ayaa maanta gudoonsiisay lacag dhan $1o kun oo dollar jaamacadda Bariga Afrika faraceedda magaaladda Buuhoodle, lacagtaasi oo ay kaga qayb qaadanayso horumarinta jaamacadda.
Waxaanay shirkadda Dahabshiil lacagtaasi kaga dhawaaqday kulan ku saabsanaa horumarinta jaamacadda oo ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan, cuqaal, culimaw’udiin, wax-garad, waalidiin, ardayda wax ka barata jaamacada iyo sidoo kale masuuliyiinta shirkadda Dahabshiil ee gobolka Buuhoodle, masuuliyiinta jaamacada iyo marti sharaf kale.
Kulankaasi oo shalay ka qabsoomay hooka shirarka jaamacadda bariga Afrika faraceedda magaaladda Buuhoodle, ayaa waxaa diirada lagu saaray horumarinta jaamacadaasi iyo sidoo kale qaadhaanka alcagaeed ee ay shirkadda Dahabshiil Group kaga qayb qaadanayso horumarinteedda.
Waxaana ka soo qaybgalayaashii kulankaasi joogay uga warbixiyey halka ay ka soo bilaabatay aasaaska jaamacada, heerarkii kal duwanaa ee ay soo martay mudadii ay jirtay jaamacadu iyo halka ay haatan marayso iyo waxyaabaha ay hiigsanaysaba gudoomiyaha Jaamacada Bariga Afrika faraceedda Buuhoodle Cabdishaafi Axmed Cali.
waxaanu yidhi ”Kulankan oo ah mid aanu u qabanay horumarinta jaamacada, waxaynu ku hormarinaynaa deeqdan dhaqaale ee ay shirkada Dahabshiil kaga qayb qaadatay horumarinta jaamacada, taas oo dhan 10 kun oo doolar.
Waxaanuna kaga gudoonay madashan masuulkeeda laanta shirkada ee Buuhoodle, waana mid aanu uga mahad celinayno shirkada Dahabshiil. Sidoo kale masuuliyiinteeda nala xasuustay in ay wax-qabadkeeda doorkan naga qayb geliyaan, iyagana waan u mahad naqaynaa. Dhinaca kale waa mid aanu filayno in ay dhamaan shirkadaha ganacsigu ku deydaan ka qayb qaadashada horumarinta jaamacada baahiyaheeda daruuriga ah”.
Dhinaca kale, guddoomiyaha jaamacadda bariga Afrika faraceedda Buuhoodle, waxa uu ka warbixiyay mar-xaladihii kala danbeeyay ee ay jaamacadu soo martay iyo waxyaabihii ay ku talaabsatay.“Waxaa noo farxad ah in ay maanta tahay jaamacdu 5-jir. Hase ahaatee waxaa guul ah in ay maanta qaan-gaadhay.
Waxaana ka baxay labadii dufcadood ee ugu horeeyey, iyadoo ka kooban hadda afar kuliyadood. Sidoo kalena ay higsanayso in ay la tartanto jaamacadaha kale ee jamhuuriyada Somaliland, isagoo gudoomiyuhu madashii kulanka ka sheegay baahiyaha xilligan u diyaarsan in kuwaas oo ay lagama maarmaan tahay in lagu garab istaago waxna lagala qabto kuwaas oo ah 4-qaybood oo kala ah, dhul, dhisme, qalabayn iyo socod-siin-ba”ayuu yidhi C/fataax Axmed.
Sidoo kale, Gudoomiyaha shirkadda Dahabshiil Group laanteeda Buuhoodle C/casiis Ismaaciil Garaad Soofe, oo isna kulankaasi hadla ka jeediyay waxaanu faahfaahin ka bixiyay lacagtan ay ugu deeqeen jaamacadda Buuhoodle. Isagoo sheegay in ay lacagtaasi kaga qayb qaadanayaan horumarinta jaamacadda.
Isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Waxaanu maanta anigoo ka wakiilka shirkada ganacsiga ee Dahabshiil group aanu ku wareejinaynaa maamulka jaamacada bariga africa xarunteeda Buuhoodle deeq lacageed oo dhan 10 kun oo dolar.
Taasoo ka mid ah waxqabadka shirkadu kaga qayb qaadato horumarka daruuriga ah ee muuqda hadba meesha ay ka jiraan ee ku haboon. Anagoo maanta kaga qayb qaadanayna horumarinta jaamacada lacagtaas cadadkaas ah oo ah tii u horeysay anagoo la garab istaagi doona hadba intii karaankayagu awoodo ka shirkad ahaan”.